Soomaaliya Oo Gashay Olale Aan Xiligiisii Gaadhin Oo Lagu Hirda Maayo Ma Farmaajo Iyo Khayre Ayaa Wada Mise Mucaarid ka | Raadgoob
Soomaaliya Oo Gashay Olale Aan Xiligiisii Gaadhin Oo Lagu Hirda Maayo Ma Farmaajo Iyo Khayre Ayaa Wada Mise Mucaarid ka
Waxaa muddo sannad iyo bar ah laga joogaa markii la doortay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, xiligaasi oo ay Soomaaliya ka baxday ololihii doorashada ee muddada socday.
Hase yeshee iminka oo dowladda hadda jirta ay u harsan tahay laba sano iyo dhowr bilood, ayaa Soomaaliya waxaa laga dareemayaa olole doorasho, waxaana dadka qaar ay aaminsan yihiin in olole doorasho oo xiligan dalka ka billowda ay dowladda ka weecineyso inay diiradda saarto arrimaha horyaalla oo ay ka mid tahay ammaanka, dib u dhiska ciidammada iyo sidii dowladda ay uga soo bixi laheyd ballamihii ay qaaday xiligii doorashada.
Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya, Mahdi Maxamed Guuleed oo bartamihii bishii Agoosto ee sanandkan ka hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay soo wadaan “xisbi-siyaasadeed weyn”.
”Xisbi weyn ayaanu soo wadnaa oo ah xisbiga xisbiyada, madaxweynuhuna uu hormuud u yahay, siyaasaddii guushii Febraayo-na lagu hogaamin doono” Sidaasi waxaa horay u yiri Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya, Mahdi.
Image captionRa’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya
Ra’iisul wasaare ku xigeenka ayaa sidoo kale sheegay in ururrada kale ee siyaasadeed aysan is dhiganin oo ay iyaguna la yimaadaan xisbiyo.
Siyaasiyiin hore oo uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan magaalada Muqdisho dib ugu laabtay ayaa ku dhawaaqay xisbi siyaasadeed loogu magacdaray Xisbiga Midowga Nabada iyo Dimuqraadiyadda, waxaana taasi laga dheehan karaa xaaladda siyaasadeed ee dalka oo xisbiyada ay iminka ku howlan yihiin doorashada sanandka 2021-ka ka dhici doonta Soomaaliya.
Dadka qaar ayaa aaminsan in dowladda federaalka ay iminka ku mashquushay sidii dib loogu soo dooran lahaa, taasi oo xeeldheerayaashu ay leeyihiin waxaa ay dowladda ka mashquulineysaa inay wax ka qabato ammaanka dalka, dhisida ciidan qaran, dib u heshiisiinta, dib u eegista dastuurka, kobcinta maamul goboleedyada curdunka ah, iyo sidii loo sii amba qaadi lahaa wadahadaladii u dhaxeeyay Muqdisho iyo Hargeysa.
Image captionXisbi uu hoggaaminayo Madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud
Dr Ibraahim Faarax Bursaliid oo ka faalooda arrimaha gobolka ayaa BBC-da u sheegay in olole doorasho oo xilligan dalka ka billowda ay dowladda federaalka ka weecineyso ajendayaasha qaran iyo sidii dowladda ay ugu adeegi laheyd shacabka.
Maxay tahay Shaqada mucaaradka?
Inkastoo xisbiyo badan oo mucaarad ah ay Soomaaliya ka jiraan, shaqada lagu yaqaano mucaaradkana ay tahay inay dowladda u bidhaamiyaan qaladaadka ay gasho, si danta dalka looga shaqeeyo ayaa haddana waxaad moodaa in xisbiyada ka jira Soomaaliya ay iyaguna ku mashaquulsan yihiin olole doorasho, taasi oo la aaminsanyahay in dowladda ay fursad u siineyso inaan lala xisaabtamin.
Image captionXaliimo Yarey “Sharcigii lagu xakamayn lahaa ololaha doorashooyinka diyaar ma aha”
Xakameynta olole doorasho oo aan xiligiisa la gaarin.
Inta badan dalalka caalamka waxaa ka jira sharciyo lagu jangooyo siyaasadda, taasi oo wakhti u mudeysa xiliga ay tahay in ololaha doorashada uu bilowdo iyo xiliga loogu talo galay inuu ku ekaado. Hase yeeshee Soomaaliya oo muddo aan lahayn nidaam dowladeed ayuusan sharcigaasi ka jirin, taasoo ka dhigeysa dalka in uusan laheyn muddada loogu talo galay in lagu fuliyo qorshaha waxqabadka.
Gudoomiyaha guddiga doorashada ee Soomaaliya, Xaliima Ismaaciil Ibraahim (Xaliima Yarey) oo BBC-da la hadashay ayaa sheegtay in sharcigii doorashooyinka ee lagu xakameyn lahaa ololaha doorashada ee xiligan uusan diyaar aheyn.
”Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sharciga doorashada u gudbisay golaha wasiirada, marka ay ansixiyaan ayaa waxaa loo gudbin doonaan xildhibaanada barlamaanka oo haddii ay iyaguna ansixiyaan loo sii gudbin doono madaxweynaha si uu u saxiiixo”.
Mucaaradka qaarkood waxay ka gaabsadeen in ay dhaqdhaqaaqyada ka socda gudaha dalka ka gaabsadaan, imkastoo ay dibadda ka wadaan kulammo xoog leh.
Image captionC/raxmaan C/shakuur: Mucaaradku kuma jiro olole doorasho
Xubnahaas waxaa ka mid ah C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka tirsan xisbiga Wadajir. Dhawaan ayuu ka soo laabtay socdaal siyaasadeed oo dheer oo uu ku soo maray dalal ku yaalla Yurub, Ameerika iyo Afrika, wuxuuse iska bari yeelay inuu olole siyaasadeed oo xilli hore ah ku jiro.
“Mucaaradka haddaan nahay kuma jirno olole doorasho, balse waxaan gudanaynaa waajibkeenna qaran ee ah inaan dawladda saxno” ayuu yiri.
Inkastoo ay u muuqato in ololihii doorashada uu durba billowday, ayaa haddana waxa la is weydiinayaa sida ay suurtogal u tahay in doorasho qof-iyo-cod ah ay ka dhacdo Soomaaliya, taasoo ka mid ah arrimaha ay dawladdan ballanqaadday inay hiraglinayso muddada ay xilka hayso.